Ny roa tamin’ny maraina, iray ny atoandro ho an’ireo naka olona tany Toamasina. Mpandeha miisa 94 isaky ny sidina izy ireo, nombam-bady aman-janaka hatramin’ny omaly maraina. Mahatratra 850 ny mpiasa teratany vahiny avy amin’ny firenena 39 no handao an’i Madagasikara. Midika io fa tena marary Ambatovy izay isan’ny iankinan’ny toekarena Malagasy. Mahatratra 8 miliara dolara ny fampiasam-bolan’io orinasa mitrandraka nikela sy kobalta io, ary izy no isan’ny manana toerana lehibe amin’ny lanjam-bola Malagasy eo anatrehan’ny vola vahiny, izay izy no isan’ny mampiditra izany betsaka eto. Milaza ny orinasa fa fampodiana vonjimaika ihany izao atao izao, fa hiverina ny famokarana ataon’Ambatovy rehefa miverina amin’ny laoniny fiainam-pirenena. Nanomboka ny 14 aprily ity orinasa ity no nikatso noho ny fanarahana lamina ara-pahasalamana. Ny 18 mey no nisian’ilay mpiasa teratany vahiny namoy ny ainy noho ny coronavirus. 150 ireo mpiasa miantsoroka ny “service minimum” ao anatin’ny orinasa, raha ny fanazavana efa nentin’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany Fidinarivo Ravokatra.